Izay manao ny sitrapony no maharitra mandrakizay
"1 Dia mbola nandroso nanao oha-teny ihany Joba ka nanao hoe: 2 Raha velona koa Andriamanitra, Izay efa nandà tsy hanome ahy ny rariny, sy ny Tsitoha, Izay efa nampangidy ny aiko. 3 Fa mbola ato anatiko ihany ny aiko, ary eo am-bavoroko ny Fanahin’Andriamanitra. 4 Dia tsy hanao teny tsy marina ny molotro, ary tsy hanonom-pitaka ny lelako. 5 Sanatria raha hanaiky ny anareo ho marina aho! Mandra-pialan’ny aiko dia tsy hanaiky ny tenako ho manan-tsiny aho. 6 Ny fahamarinako dia hazoniko mafy ka tsy ho foiko; Ny foko tsy manome tsiny ahy akory na dia ny amin’ny androko iray monja aza. 7 Aoka ho hita fa ratsy fanahy ny fahavaloko, ary tsy marina izay mitsangana hanohitra ahy. 8 Fa inona no fanantenan’ny mpihatsaravelatsihy, raha maito ny ainy, ka tsoahan’Andriamanitra ny fanahiny? 9 Hihaino ny fitarainany va Andriamanitra, raha ozoim-pahoriana izy? 10 Ho azony hiravoravoana va ny Tsitoha? Hahazo miantso an’Andriamanitra mandrakariva va izy? 11 Hampianatra anareo ny amin’ny tànan’Andriamanitra aho, ary tsy hisorona anareo aho ny amin’ny hevitry ny Tsitoha. 12 Indreo, hianareo rehetra samy efa nahita izany; Koa nahoana hianareo no manao hevi-poana? 13 Izao no anjaran’ny ratsy fanahy avy amin’Andriamanitra, sy lovan’ny lozabe raisiny avy amin’ny Tsitoha: 14 Na dia mihamaro aza ny zanany, dia ho an’ny sabatra ihany ireny. Ary ny zaza aterany tsy ho voky hanina; 15 Ny ankohonany sisa dia hasitrik’Ifahafatesana, ary tsy hisaona azy ny mpitondratenany; 16 Na dia mahary volafotsy hoatra ny vovoka aza izy ary mahangona fitafiana hoatra ny fotaka, 17 Eny, manangona ihany izy, nefa ny marina no hitafy izany, ary ny tsy manan-tsiny no hizara ny volafotsy; 18 Manao ny tranony tahaka ny an’ny lolofotsy izy, ary tahaka ny trano rantsan-kazo ataon’ny mpiandry voly; 19 Ao avokoa ihany ny hareny, raha vao mandry izy; Nefa nony ahirany ny masony, dia tsy ao intsony ireny. 20 Ny fampahatahorana mahatratra azy tahaka ny riaka: Nony alina paohin’ny tafio-drivotra izy; 21 Ny rivotra avy any atsinanana mampiainga sy mahalasa azy ka mipaoka azy hiala amin’ny fitoerany; 22 Asian’Andriamanitra izy ka tsy iantrany, ary mandositra dia mandositra ho afaka amin’ny tànany izy; 23 Tehafin’ny olona tànana izy Sady isitrisirany ka ampialainy amin’ny fonenany." Joba 27:1-23
Fandresen-dahatra lalina (1-5). Ny olona tsirairay ihany no tena mahafantatra ny fifandraisany manokana amin’Andriamanitra. Izay hita ety ivelany mety hamitaka. Eto Joba dia tena nanana toky sy fahasahiana lalina nilaza fa tsy marina ny fiampangana azy ho manan-tsiny ary Andriamanitra dia nahafantatra izany loatra (Joba 1:8). Azo tarafina ao anatin’izao ny fifandraisana akaiky dia akaiky nisy teo amin’Andriamanitra sy Joba.
Finoana tsy miozongozona (6-12). Tsaroana eto ilay tenin’i Paoly ao amin’ny 2Timoty 1:12. Ary dia izany tokoa no niainan’i Joba. Fantany fa tsy hamela azy ho irery Andriamanitra ary tena niaina tao anaty fiadanam-po izy na dia anaty fahoriana lalina aza (6). Moa tsy izany ve no tena iriantsika isan’andro, ny hanana fiadanam-po ao anatin’ny ady sarotra? Tena fitaratra i Joba ny amin’ny fahitsiany.
Zava-poana ny zava-drehetra (13-23). Ny olona mitoky amin’Andriamanitra mahatsapa fa ny zavatra rehetra miseho eo amin’ny fiainana dia miara-miasa hahasoa avokoa (Rômanina 8:28), ary na inona na inona fitrangany dia Andriamanitra no mametraka ny hery sy fiadanana hahazakana izany. Mety ho fisedrana izany, fa mety ho fanefena ihany koa. Eto dia habaribarin’i Joba fa ny olona tsy manao ny sitrapon’Andriamanitra na minia tsy te-hahalala Azy kosa dia famaizana no ho vokatr’izany ary fahoriam-be tsy hay zakaina no aterany.
Hafatra: Mandalo ny zavatra rehetra, “Saino ny zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra ety an-tany” Kolosianina 3:2.